Toerana filokana an-tserasera an-tserasera indiana - Kaody Bonus Bonus amin'ny Internet
Loading ... Tsy voafaritra tsara ny lalàna mifandraika amin'ny filokana ao India. Ny ankamaroan'ny filokana ao amin'ny firenena dia tsy misy lalàna mandràra ny lalàna filokana ao 1867 mandràra ny asany na ny famangiana casinos sy ny sazy kely na ny fonja.
Hatreto dia mbola tsy manana lalàna mazava momba ny filokana ny firenena. Ny filalaovana ara-dalàna any India dia tsy misy afa-tsy amin'ny faritra telo: Sikkim, Goa ary Daman. Ao Goa dia misy trano filokana fito miorina amin'ny tany izay milina slot no tena mametraka azy. Ny lalao any amin'ny birao dia misy amin'ny fitsangatsanganana an-tsambo dimy manaraka ny moron'ny reniranon'i Mandovi sy ireo trano filokana monina any Sikkim.
Vao haingana teo, tamin'ny Aogositra 2016, tany Macau no nanokatra ny casino maoderina indrindra eran-tany Wynn Palace, izay ny saran'ny trano fanorenana dia teo amin'ny tantaran'ny fanorenana ny casinos ary nahatratra ny 4.2 miliara dolara. Misy lottery, saingy amin'ny ankamaroan'ny hafa dia voarara ao amin'ny fanjakana indiana dimy. Ny fifaninanana Sports Betting voafetra voafetra, izay heverina ho lalao fahaizana fahaiza-manaon'ny Fitsarana Tampony ao 1996.
Lisitry ny Top Sites Indo-10 Indian Casino
Lalao an-tserasera ao India
Satria tsy manome fahazoan-dàlana hiasa amin'ireo tranonkala filokana an-tserasera any India ny governemanta, koa ny lalàna otsutstvuetyut dia miompana amin'ny filokana amin'ny Internet ihany koa. Satria voarara ny filokana eto an-tany amin'ny ankamaroan'ny India, maro no mino fa mihatra amin'ny filokana an-tserasera ihany koa izany. Saingy tsy misy politika henjana amin'ity faritra ity, izay mety hanakana ny mpiloka Indiana hilalao amin'ny Internet, ka manao izany foana izy ireo.
Amin'izao fotoana izao, Sikkim no hany faritany ao India, izay miasa tsena voafetra mifehy ny filokana amin'ny Internet, ary tamin'ny fahavaratra 2015 dia nanokatra tranokala fanatanjahan-tena an-tserasera an-tserasera voalohany tao India izy io. Sikkim koa dia mpitarika ary miaraka amin'ny Sikkim Super Lotto. Niorina tamin'ny 2002, ny loteria ihany no hany toerana filokana ara-dalàna eto an-toerana.
Na eo aza ny teorika azo atao ny manome fahazoan-dàlana isan-karazany amin'ny filokana sy filokana ara-panatanjahantena mifanaraka amin'ny lalàn'ny filokana amin'ny Internet Sikkim (2008) sy ny fitsipi-dalao an-tserasera Sikkim (2009), tsy mbola nisy mpikirakira iray nomena lisansa feno. Noho izany, ireo mpilalao Indiana mankafy ny lalao filokana poker sy bingo, filokana ara-panatanjahantena ary trano filokana an-tserasera dia voatery mampiasa tranonkala filokana an-tserasera vahiny.
Mandritra izany fotoana izany, ny mpiloka ondiyskie dia tena mamorona amin'ny fanokafana petra-bola noho ny zava-misy fa ny fifanakalozana ara-bola mivantana eo amin'ny mponina ao India sy ireo toerana filokana vahiny dia mandrara ny filokana an-tserasera any India. Tamin'ny Mey 2011, India dia namoaka lalàna federaly momba ny teknolojia fampahalalana, izay misy fepetra voafetra mba hameperana ny filokana amin'ny Internet ary apetraka amin'ireo mpamatsy Aterineto tompon'andraikitra amin'ny fanakanana ireo tranokala filokana an-tserasera eny ivelany.
Ny habaka aterineto amin'ny aterineto dia manaiky mpilalao avy any Inde
Jereo ny lisitry ny tranokala an-tserasera izay manaiky mpilalao avy any India, ary manolotra lalao kalitao sy azo antoka. Eto ianao dia hahita fialamboly marobe avy amin'ny milina slot ka hatramin'ny lalao kasino mivantana amin'ny mpivarotra rindrambaiko malaza toy ny NetEnt, Merkur, IGT, Novoline, Microgaming, Betsoft, Rival Gaming, sy ny maro hafa.
Azonao atao ihany koa ny mamaky ny fanadihadinay momba ny tranonkala kazinina ao amin'ny aterineto, mba hahafantarana ireo fampiroboroboana tsara indrindra amin'ny Internet, bonus sy safidy azo vidiana ho an'ireo mpilalao avy any India.
0.1 Lisitry ny Top Sites Indo-10 Indian Casino
2.1 Lalao an-tserasera ao India
2.2 Ny habaka aterineto amin'ny aterineto dia manaiky mpilalao avy any Inde
maimaim-poana amin'ny filokana Kasino lalao hahafinaritra